YoCoin စျေး - အွန်လိုင်း YOC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို YoCoin (YOC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ YoCoin (YOC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ YoCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
YOC – YoCoin
Market ကဦးထုပ်: $67 501.00
volume_24h_usd: $6 675.74
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ YoCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
YoCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
YoCoinYOC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000281YoCoinYOC သို့ ယူရိုEUR€0.000237YoCoinYOC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000214YoCoinYOC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000255YoCoinYOC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0025YoCoinYOC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00176YoCoinYOC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00618YoCoinYOC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00104YoCoinYOC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000372YoCoinYOC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000391YoCoinYOC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00617YoCoinYOC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00218YoCoinYOC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00152YoCoinYOC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.021YoCoinYOC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0474YoCoinYOC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000385YoCoinYOC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000429YoCoinYOC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00874YoCoinYOC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00195YoCoinYOC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0299YoCoinYOC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.333YoCoinYOC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.108YoCoinYOC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0204YoCoinYOC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00767
YoCoinYOC သို့ BitcoinBTC0.00000002 YoCoinYOC သို့ EthereumETH0.0000007 YoCoinYOC သို့ LitecoinLTC0.000005 YoCoinYOC သို့ DigitalCashDASH0.000003 YoCoinYOC သို့ MoneroXMR0.000003 YoCoinYOC သို့ NxtNXT0.0219 YoCoinYOC သို့ Ethereum ClassicETC0.00004 YoCoinYOC သို့ DogecoinDOGE0.081 YoCoinYOC သို့ ZCashZEC0.000003 YoCoinYOC သို့ BitsharesBTS0.00865 YoCoinYOC သို့ DigiByteDGB0.00898 YoCoinYOC သို့ RippleXRP0.000997 YoCoinYOC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 YoCoinYOC သို့ PeerCoinPPC0.000931 YoCoinYOC သို့ CraigsCoinCRAIG0.128 YoCoinYOC သို့ BitstakeXBS0.012 YoCoinYOC သို့ PayCoinXPY0.0049 YoCoinYOC သို့ ProsperCoinPRC0.0352 YoCoinYOC သို့ YbCoinYBC0.0000002 YoCoinYOC သို့ DarkKushDANK0.0901 YoCoinYOC သို့ GiveCoinGIVE0.608 YoCoinYOC သို့ KoboCoinKOBO0.064 YoCoinYOC သို့ DarkTokenDT0.000259 YoCoinYOC သို့ CETUS CoinCETI0.811
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 19:25:02 +0000.